ဘီယာကို စိတ်ကြိုက်အဝသောက်လို့ရမယ့် အမူးသမားတို့ရဲ့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ - TheeSayChin
ဘီယာကို စိတ်ကြိုက်အဝသောက်လို့ရမယ့် အမူးသမားတို့ရဲ့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ
မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုတော့ လူတော်တော်များများသိကြမှာပါ။ တာထွက်ကနေစပြီးတောက်လျှောက်ပြေးရမှာ ပန်းတိုင်အထိပါပဲ။ ပြေးနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ အကွာအဝေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ မောရင်သောက်လို့ရအောင် ရေသောာက်လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မောရင်ရေသောက်လို့ရမယ့်အစား ဘီယာပဲတိုက်တဲ့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲဆိုရင်ကော သင်စိတ်ဝင်စားမလားဗျ။
We’re on the hunt for crazy vikings to join us in our record breaking marathon Viking Ship ‘The Million Squid’. We’re aiming to raise £1 million for Children with Cancer by taking our ship to marathons around the globe. Interested in becoming part of the crew? Drop usamessage! pic.twitter.com/LLCQtfof5V
— Rat Race (@RatRaceHQ) December 13, 2019
Republic World သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဒီလ၂၀၂၀ခုနှစ်မေလမှာ အမူးသမားတို့ အပြေးပြိုင်ပွဲကို ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပတာကတော့ Rat Race Adventure Sports မှဖြစ်ပြီး ဒီလိုပွဲကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကလေးငယ်များကင်ဆာကုသရေးရန်ပုံငွေအတွက် ဒီလို မာရသွန်ပွဲကို ကျင်းပတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ မောရင် ပြေးလမ်းမှာရှိတဲ့ ရေဘးတွေကိုသောက်သုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲမှာတော့ မောရင် သောက်ဖို့အတွက် ရေအစား ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံထုတ် ဘီယာတွေကို အမောပြေသောက်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ပြေးရမှာက ဒီပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်လေးပါ။
Congrats and cheers to everyone who finished the Beer Lovers Marathon today in Liège, Belgium ? pic.twitter.com/uRZzcDNKum
— Beer Runner (@TheBeerRunner) June 9, 2019
အရင်နှစ်၂၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ရှု့စားကြည့်ရအောင်ဗျာ။
#RT @runnersworlduk: With the Marathon du Medoc this weekend, we’ve hand picked the best boozy running races for beer and wine lovers to take on – https://t.co/81GLJSaGDN pic.twitter.com/5QuvbgqbOy
— Tim Redman ?? (@timbo_runs) September 4, 2019
Beer Lovers’ Marathon 2019 https://t.co/KoqYINATSa pic.twitter.com/eRY9LruhZj
— Bernadette Schlueter (@bmschlueter) July 17, 2019
Le Beer Lover’s Marathon d’aujourd’hui à Liège (photos 2) ? pic.twitter.com/HfzJIYFIk8
— Loulou (@LouiseCatlou) June 9, 2019
ဦး ဆို တဲ့ အသံကြားရင်ခု ချိန်ထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတယ် ဆို တဲ့ ဦးလေးကြီး.
နောက် လာ မယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ မင်း အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား